Taizhou Kechang Plastic Industry Co., Ltd. waa shirkad xirfadeysan oo waxsoosaarka iyo waxsoosaarka badeecooyinka caagga ah, dhalooyinka caagga ah, dhalooyinka la isku qurxiyo, dhalooyinka kiimikada ee maalinlaha ah, sanduuqyada caagga ah, boogaha balaastikada ah, kaalmada caagga balaastigga ah, daboollada caagga ah iyo alaabada kale, oo leh nidaam maareyn tayo oo dhammaystiran oo cilmiyeysan. Taizhou Kechang Warshadaha Caaga Co., Ltd. xoogga daacadnimada iyo tayada wax soo saarka ayaa la aqoonsaday by warshadaha.
Shirkaddayadu waxay soo aruurisay tiro badan oo cilmi-baaris cilmiyeed iyo shaqaale maareyn oo tayo sare leh, waxay dhistay shaybaar tijaabo oo si buuxda u shaqeynaya. Horumarinta dhaqaalaha suuqa, iyada oo lagu saleynayo badeecooyin tayo sare leh, adeeg aad u fiican iyo sumcad wanaagsan, waxaan si wanaagsan u helnay macaamiisha.
"Tayo, Horta Macaamilka, Sumcad, Iskaashi Daacad ah"
Shirkaddu waxay aasaastay nidaamka shabakadda iibka gudaha iyo dibaddaba, waxay dejisay kooxda iibka xirfadleyda ah gudaha iyo dibaddaba, waxay furtay suuqyada gudaha iyo dibaddaba, waxayna leedahay la -hawlgalayaal badan Yurub, Ameerika iyo Aasiya si loo ballaariyo ganacsiga.
Alaabtayada & Makiinado
Labadii sano ee la soo dhaafay, shirkaddu waxay gelisay lacag aad u badan si ay u fuliso isbeddel farsamo oo baaxad leh. Dhismaha warshadda waxaa loo qaabeeyey loona dhisay si adag iyadoo la raacayo shuruudaha GMP ee maamulka cuntada gobolka iyo dawooyinka ee soo -saarka dawooyinka, aqoon -isweydaarsiga wax -soo -saarku wuxuu gaadhay heerka warshadaha dawooyinka ee caalamiga ah ee darajada 10,000 iyo darajada 100,000 nadiifinta deegaanka.
Iyo horudhaca duritaanka gudaha ee mashiinka wax lagu dhajiyo ee godka ah iyo mashiinka wax lagu durayo iyo mashiinka nuugista caagga ah ee otomaatiga ah, mashiinka qolofka suuxinta otomaatiga ah iyo aaladaha kale ee wax soo saarka, iyo sidoo kale infrared, spectrophotometry ultraviolet, dheelitirka falanqaynta elektiroonigga ah ee qalabka ogaanshaha heerka-sare.
Taizhou Kechang Warshadaha Caaga Co., Ltd. ayaa la siiyay shahaadada diiwaangelinta ee alaabta baakadaha dawooyinka warshadaha iyo weelasha maamulka gobolka cuntada iyo dawooyinka.
Waxay soo saari kartaa agab baakadeyn caafimaad oo aad u sarreeya iyo weelal noocyo iyo qaabab kala duwan ah
weelasha cusub ee cuntada iyo baakadaha la isku qurxiyo
qaybo kala duwan oo duritaan sax ah oo caag ah
Shirkadda waxaa ka go'an baakadaha la isku qurxiyo iyo warshadaha baakadaha dhalada ee maalinlaha ah si loo ballaariyo, wuxuu leeyahay waayo -aragnimo wax -soo -saar oo hodan ah iyo teknolojiyad xirfadeed oo heer sare ah, xilligan baahida macaamiisha sidoo kale waxay siisaa daaweyn mudnaan leh, heerka qanacsanaanta macaamilka.
Shirkaddayadu waxay soo aruurisay tiro badan oo cilmi-baaris cilmiyeed iyo shaqaale maareyn oo tayo sare leh, waxay dhistay shaybaar tijaabo oo si buuxda u shaqeynaya. Horumarinta dhaqaalaha suuqa, iyada oo lagu saleynayo badeecooyin tayo sare leh, adeeg aad u fiican iyo sumcad wanaagsan, waxaan si wanaagsan u helnay macaamiisha. Shirkaddu waxay aasaastay nidaamka shabakadda iibka gudaha iyo dibaddaba, waxay dejisay kooxda iibka xirfadleyda ah gudaha iyo dibaddaba, waxay furtay suuqyada gudaha iyo dibaddaba, waxayna leedahay la -hawlgalayaal badan Yurub, Ameerika iyo Aasiya si loo ballaariyo ganacsiga. Waqtigan xaadirka ah, si loo horumariyo suuqyada dibedda, shirkaddu waxay siin doontaa macaamiisha dibedda daawayn iyo kaalmo mudnaan leh, waxay si diiran u soo dhaweynayaan inta badan macaamiisha dibedda inay yimaadaan si ay ula tashadaan.
Maaraynta wax -soo -saarka oo adag, qalab casri ah iyo tiknoolajiyad, tayada wax -soo -saarka, sharafta qandaraaska oo lagu kalsoonaan karo, inta badan macaamiisha ayaa aamminsan oo soo dhoweynaysa, nooc kasta oo alaab ah ayaa lagu iibiyaa gudaha iyo dibaddaba, si diirran u soo dhawee macaamiisha cusub iyo kuwii hore ee dalka iyo dibaddaba si ay uga wada xaajoodaan ganacsi.
Hordhaca taariikhda horumarka shirkadda
Hore ayaan u soconnay.
Boqol kun oo aqoon isweydaarsi daahirinta fasalka ah
In la sameeyo waaxda kormeerka tayada shirkadda si ay u samayso kormeer tayada dhirta dhexdeeda ah qayb kasta oo ka mid ah alaabta warshadda.
Ku dar 5 khad oo si toos ah u afuufaya
Geli qalabka nabarka leh, samee aqoon -is -weydaarsi.
Waaxda ganacsiga shisheeye ee ka kooban, horumariyo suuqa ganacsiga dibadda.
Qaab -dhismeedka ururka ee shirkadda ayaa si weyn loo hagaajiyay. Dhowr hoosaad iyo waaxyo ayaa la aasaasay.
Waxaa loo dhoofiyay dalal badan wuxuuna sameeyay nidaam ganacsi ganacsi oo dibadeed oo deggan.